Global Voices teny Malagasy » Palestina: Fihetsiketsehana ho amin’ny firaisam-pirenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Palestina: Fihetsiketsehana ho amin'ny firaisam-pirenena
Voadika ny 18 Marsa 2011 4:30 GMT 1	 · Mpanoratra Betsy Fisher Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Palestina, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Mediam-bahoaka
Niantso fihetsiketsehana ao Gaza  sy Cisjordanie ireo tanora tsy miankina ao Palestina ny 15 martsa 2011, mba hampiseho ny fankatoavany an'i Palestina fa tsy i Hamas sy Fatah. Nokarakaraina tamin'ny alalan'ny Facebook izany, an-jatony ireo nanao fihetsiketsehana teo amin'ny kianjan'ny al-Katibah ao an-tanànan'i Gaza.
Hita tokoa fa ny sainam-pirenen'i Palestina ihany no mihofahofa – fa tsy tazana teo ny sainan'ny Hamas. Avy eo, noteren'i Hamas horavaina amin-kery ny fihetsiketsehana, vokatr'izany maro ireo olona naiditra hopitaly.
Nanoratra momba ny zavamisy hitany ao amin'ny kianjan'i Katibah ao Gaza i Omar Ghraeibi t:
Mampitolagaga ny androany, nanao fihetsiketsehana tao al katibah ny vahoaka ary nanao filaharambe, avy eo nifindra tao amin'ny kianjan'ny al jundi l majhool, nandeha tsara daholo ny zava-drehetra mandra-pahatongan'ireo mpanohana ny Hamas. Tian'ireto farany atao ao amin'ny kianjan'ny al jundi al majhool indray ny fihetsiketsehana hampisehoana ny sainam-pirenen'i Hamas, nahare izany ireo mpanao fihetsiketsehana ka niezaka nanazava fa ny fihetsiketsehana amin'ny #March15 dia tanora daholo ary tsy misy ambadika politika na fiandaniana ara-politika.
Fifandonana mahavariana no niseho teo amin'ireo antoko roa, nifampitorabato sy nifampiteny ratsy izy ireo mandrapaha tapa-kevitr'ireo tanora hiala teo amin'ny kianjan'i al jundi ary hiverina indray ao al katibah satria tsy mitady korontana izy ireo. Nafana sy nahavariana ny fiarahana tao, maro ireo tanora tonga tao ary mbola maro koa ireo tonga isaky ny minitra. Mihira, mandihy, ny tsirairay. Tsara ny andro.
Nandeha mba handray ireo sary, horonan-tsary sy feo nalaiko aho satria tsy nisy fifandraisana tao al katiba, minitra vitsy aoriana, naheno aho fa nampitandrina ny rehetra ny Hamas mba hiala ao alkatibah alohan'ny amin'ny 5ora hariva mba tsy hisian'ny fampiasan-kery. Tsy te-ahalala io fampitandremana io anefa ny vahoaka ka mbola nirohotra tao al katibah ihany ary mikasa hanao fipetrahana sy fatoriana mitokona eo.
tamin'ny 7 ora hariva, nisy zavatra hafahafa niseho, nanomboka naheno feon'anjomara aho, avy eo feona basy ary vahoaka mikiaka sy mihazakazaka eny amin'ny làlana rehetra. (Mipetraka eo akaikin'i al katibah aho) Niharatsy ny toe-javatra ary tsy nisy olona intsony tao al katibah rehefa noesorin'ireo Hamas tamin-kery, maro ny mpanao fihetsiketsehana naratra.
Lahatsary Youtube mialoha ny fanafihana:
nieritreritra ireo mpanao fihetsiketsehana i Abuel Sharif:
Tsy voa-Janahary ny zava-miseho ao Palestina, tsy voa-Janahary ny fizarazarana, tsy voa-Janahary ny manana ny rahalahiko ho fahavalo, mampalahelo ahy ny milaza fa ny andro nipetrahan'Isiraely tao Palestina no araka ny tena izy,raha tsy izany, tsy miaina amin'ny toe-javatra araka ny tokony izy isika !
Nandefa sary mitohitohy  koa i Omar Ghraeib :
Fitokonana tao Gaza taona 2011, 2 andro ! Tanora nifindra tao al katiba! Nalefa tamin'ny Twitpic ,nampiasa: Omar_Gaza.
Tamin'ny 15 Martsa, nandefa lahatsary misy ireo mpanao fihetsiketsehana naparitaka tao Katiba i Ghonaim :
An-jatony ireo niverina teny an-dalambe tamin'ny Alarobia, 16 Martsa. Nitatitra ny Tweeps fa mbola tratry ny herisetra avy amin'ireo mpanohana ny Hamas ny fihetsiketsehana.
Ni-tweet  i Omar:
@Omar_Gaza: Mpanao fihetsiketsehana lahy sy vavy nipetraka ao amin'ny oniversité ao al azhar dia voatafika sy voavono! allah ma3ko
Ni tweet  mitovy koa i Laila Abu Dahi:
@LailaDahi: #video ny herim-pamoretana Hamas nanafika mpianatra vehivavy tao Al-Azhar uni. raha niezaka namonjy azy ireo ny lehilahy http://bit.ly/dY5eOB  #Mar15
@AmoonaE nandefa ity horonan-tsary ity  tamin'ny 16 Martsa, nampiseho ny mpianatry Al-Azhar voavelin'ireo mpanafika mitam-piadiana miaraka amin'ny kibay:
Tonga tao amin'ny fihetsiketsehana ho amin'ny firaisam-pirenena ny Palestiniana ao Ramallah tamin'ny 15 Martsa, nampiseho ny tsy fiankinany amin'ny Fatah. Mpampiasa Twitter @Palestinevoiced namoaka vaovao fanampiny:
@Palestinevoiced : maherin'ny 2,000 ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny kianjan'i Manara tao Ramallah amin'izao fotoana izao. #Palestine #mar15
Nampiana kely, raha mijery ny sainam-pirenena mavo ny Fatah:
Niditra ao anatin'ny fihetsiketsehana ny Fatah 30 minitra izay. (tsy misy saina mavo aloha farafaharatsiny). #Palestine #mar15
Niezaka nandrava ny fihetsiketsehan'ireo antoko tanora tsy miankina ny mpanohana ny Fatah #Palestine #mar15
Nitohy ny 16 martsa ny fihetsiketsehana ary mbola nitohy izany tamin'ny 8 ora alina araka ny @Palestinevoiced :
Manodidina ny 200 an-jatony ireo mpanao fihetsiketsehana tao Ramallah! #Palestine #mar15
Fihetsiketsehana ny alin'ny 16 Martsa hita  fa nilamina:
Nizara sakafo sy zava-pisotro ho an'ireo vahoaka tao Ramallah ny polisy ANDROANY. Mazava fa sady te hilalao izy ireo. #Palestine #mar15
Ni-tweet mivantana ao Gaza ny @NalanSarraj , @Omar_Gaza , @LailaDahi , sy @nazek88 . Ni-tweet tao Ramallah @Palestinevoiced  sy @Palestine15Mar , nandika ny tweet sy ny vaovao avy amin'ireo Twweps hafa manerana an'i Palestina @AmoonaE  .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/18/14842/
 fihetsiketsehana ao Gaza: http://www.nytimes.com/2011/03/16/world/middleeast/16gaza.html?_r=1
 Nanoratra momba ny : http://gazatimes.blogspot.com/2011/03/from-great-happiness-to-major.html
 nieritreritra : http://abuelsharif.com/abuelsharif/2011/03/15/talking-about-15thmarch/
 nandefa ity horonan-tsary ity: http://www.youtube.com/watch?v=uQw_KEE5LmY&feature=youtu.be
 Nampiana : http://twitter.com/#!/palestinevoiced/status/47602057661779968
 Nitohy : http://www.washingtonpost.com/world/palestinians-rally-for-unity-in-gaza-west-bank/2011/03/15/AB72yFZ_story.html